Ampiasaina amin'ny fantsom-boaloboka vy maivana misy karbonina ambany sy firafitra vy ambany miaraka amin'ny naoty ambany, toy ny Q235, 09MnV, 09Mn2, sns
WC20 Cerium Tungsten Electrode ho an'ny WIG welding
Tianqiao marika cerium tungsten electrode dia vokatra elektroda tungsten vita amin'ny alàlan'ny fampidirana oksidia cerium an-tany tsy fahita amin'ny fototra tungsten amin'ny alàlan'ny metallurgy vovoka sy ny fikororohana, ny fikosoham-bolo ary ny fanosorana. Tianqiao marika cerium tungsten electrode dia tsy misy fandotoana radioaktifa ary vokatra maitso. Afaka manomboka arc mora foana izy raha tsy misy onja kely fotsiny, ary kely ihany koa ny arofenan'ny arc. Eo ambanin'ny toetr'andro DC ambany na ny savaivon'ny electrode dia ambany noho ny 2.0mm, ny electrode cerium-tungsten no safidy voalohany indrindra ho an'ny electrode thorium-tungsten.
WT20 Thoriated Tungsten Electrode ho an'ny WIG welding
Ny metatra Tianqiao thior tungsten electrode dia mora ampiasaina, enta-mavesatra be ankehitriny, mora manomboka arc, arc azo antoka, elanelam-piatoana arofanina lehibe, fatiantoka kely, androm-piainana lava, hafanan'ny recrystallization avo lenta, fitondra mandeha tsara kokoa ary fampisehoana fanapahana mekanika tsara. Tungsten thorium electrode dia fitaovana avo lenta ho an'ny welding avo lenta.
WL15 Lanthanum Tungsten Electrode ho an'ny welding WIG
Tianqiao marika lanthanum tungsten electrode dia manana fahombiazana fanapahana mekanika kokoa, fanoherana tsara kokoa, ary fahamendrehana mafy, noho izany dia manana androm-piainana lava kokoa ny elektroda. Ny elektrônika tungsten Lanthanum dia mety ihany koa amin'ny asa fanodinana ankehitriny miaraka amin'ny fampisehoana tena tsara.
WZ8 Zirconium Tungsten Electrode ho an'ny welding WIG
Tianqiao marika zirconium tungsten electrode dia mahavita tsara eo ambanin'ny fepetra AC. Rehefa mihodina, ny farany dia afaka mitazona endrika boribory ary ny arc dia miorim-paka kokoa noho ny electrode tungsten madio. Indrindra amin'ny toe-javatra mavesatra be, ny zava-bitan'izy ireo ambony dia tsy azo soloina amin'ny electrodes hafa.
Tianqiao marika tungsten elektroda dia mandray ny teknolojia mandroso ao an-toerana mandroso, ary ny ambonin'ilay vokatra dia manana malefaka avo lenta ary tsy misy burrs. Raha ampitahaina amin'ny vokatra hafa, ny arc dia mifantoka kokoa ary marin-toerana kokoa.
Malaza indrindra amin'ny fametahana entona fandefasana lasantsy sy vy amin'ny varahina. Azo ampiasaina amin'ny famonoana varahina, vy, varahina-nikela, vy manipika ary karbida fanapahana fitaovana incrustation.
Varahina welding vy alimo Silicon Bronze Welding Wire CuSi3 ERCuSi-A CuSi3Mn1 brazing rod
Ny tsara indrindra ho an'ny volo sy ny mafy atrehana varahina, indrindra ho an'ny fantsom-by vy MIG vita amin'ny vy.
Ny hafanana mialoha dia nanolo-kevitra rehefa MIG mafy miatrika vokatra lehibe sy ny fampiasana pulsed argon arc welding raha mafy miatrika vy.
Tora-by vita amin'ny gazy vita amin'ny varahina
Ny malaza indrindra amin'ny fitaovana famonoana lasantsy sy gazy karbonika dia vy amin'ny varahina.
Azo ampiasaina amin'ny famonoana varahina, vy, varahina-nickel, vy vy ary karbida fanapahana fitaovana firongatry incrustation.
Ss Welding Electrode, Kavina vy 1.5 Mm, vy vy, Tsorakazo vy tsy mitovy, electrode welding, Atsofohy vy vy vy,